Zaza 9 volana voan’ny « coronavirus » Tsy maty izany...hoy ny reniny!
Niely tao amin’ny tranonkala vazaha antsoina hoe freedom.fr omaly, fa nahitana trangana fahafatesana vokatry ny « coronavirus » teto Madagasikara. Raha ny nambaran’io tranonkala io hatrany dia zazalahikely 9 volana izay voamarina fa
Raha fehezina amin’ny teny tokana, dia hoe : mahatsiaro sambatra be ianao miaraka aminy. Ny olona tia mantsy dia manaja ny olona tiany, manome hasina azy, manome lanja azy, mitsinjo azy, miraharaha azy ary mikatsaka foana izay hahasoa, hahatsara ary hampandroso azy. Raha toa izany ianao ka tsy mahatsiaro fijaliana miaraka aminy, raha toa ianao mahatsiaro tena ho mihatsara, dia tia anao izy izany.
Efa herintaona izao no niaraka izaho sy ilay olon-tiako. Mifampiantso foana izahay ary mifankahita in-dray mandeha isam-bolana. Misy vehivavy anankiray izay anefa manadala azy foana, ka leo aho amin’ny fandrebireben’io azy. Ilay olon-tiako milaza ho tsy tia an’io vehivavy io. Te hiresaka amin’io vehivavy io aho fa tsy avelany fa sao miteraka olana, hono. Inona no ataoko fa marary ny foko ?
Izay hampiasa saina anao sy hankarary ny fonao izay indrindra no tadiavin’ilay vehivavy. Aza avela handresy amin’izany izy, izany hoe : aza ivakiana loha fotsiny tsotra izao izay rehetra ataony. Rehefa mifankatia tsara ianao sy ilay olon-tianao dia izay no zava-dehibe. Ny mampatahotra anao manko dia sao ho voarebirebiny ilay olon-tianao amin’ny farany. Noho izany, ampio ny fitokisana io olon-tianao io. Matokia koa tena. Aza ambenana tsy hihetsika izy, saingy ataovy kosa izay hahatadidiavany foana fa misy ianao ary tena tia azy ianao. Manaova metimety foana, mitadiava fomba hanaitairana ilay olon-tianao foana, dia tsy hisy olona hahavita handrebireby azy. Fadio kosa ny mitady resaka amin’ilay vehivavy fa ataovy ho toy ny tsy misy izy. Rehefa leo izy dia hijanona ihany.